Pumpkin Seeds - Aad u fiican in la yareeyo kolestaroolka xun iyo hagaajinta caafimaadka beerka iyo wadnaha - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD »Pumpkin Seeds - Waxay u fiican tahay dhimista kolesteroolka xun iyo hagaajinta beerka iyo caafimaadka wadnaha
Bocalka waa a khudradda aad u faa'iido leh taas oo xitaa loo isticmaalo barnaamijyada cuntada iyo cuntada ee carruurta. Marka laga reebo jirka, miraha midhaha ayaa si ballaaran loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn ah haddii ay qalalan yihiin.
Публикация от ПП🥗и Не пп🍟рецепты (@arina_milenskay) 15 Fev 2019 ee 9: 25 PST
Abuurka Pumpkin waxaa ku jira saliid dufan, asiidh organic, fitamiin B iyo C, amino acids iyo carotenes. Cunida ku saabsan abuurka 150 waxay bixisaa borotiinka lagama maarmaanka ah, fitamiin K, magnesium, fosfooraska, birta, copper iyo zinc ee jirka bini'aadamka. All in dhan, abuur bocorka yihiin wareer ah fitamiinada iyo walxo faa'iido leh.
Boostada ay wadaagaan Maggie Michalczyk, RDN (@onceuponapumpkin) on Nov 13, 2017 at 6: 13pm PST
Qalabkan cajiibka ah ayaa u oggolaanaya isticmaalka bocorka miraha si loo wanaajiyo shaqada wadnaha iyo xitaa daaweynta prostatitis. Waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad la dagaallanto kolestarool xun iyo hoos u dhigidda sonkorta dhiigaaga.
Maqaal ka-noqoshada PRIAMIE ПОСТАВКИ (@vitamin_has) 3 MAR 2019 ee 11: 40 PST
Waxay waxaa lagu talinayaa in la hagaajiyo dheefshiidka, yareeyo bararka iyo in la yareeyo halista ah ee kansarka caloosha, naaska, sambabada, prostate iyo mindhicirka.
Waxaad cuni kartaa miraha bokshinka ee cayriin ama karsan. Ku dar saladhaha, jilicsanada, quraacyada ama cunaan iyaga oo kaligood ah sidii cunto fudud. Sample saxarado leh bocorka miraha:
ku dar saladh si aad u bixiso dhadhan qallalan;
at quraac, ku dar lowska, miraha la qalajiyey oo la jarjaray iyo yogurt;
Waxaad ku dubataa saliid saliid ah iyo cadar;
xoqin abuurka qashinka si aad u hesho subagga (haddii ay aad u qalalan yihiin, ku dar biyo yar).
Ku dhaji Winnie Cai (@cakeoutofoven) on Apr 8, 2019 at 10: 19pm PDT
Maydhayaasha boodhka ayaa faa'iido u yeelan kara jirka haddii aad ku darto adiga cunto. Waxaad hubin doontaa hagaajinta caafimaadkaaga iyo xaaladdaada guud.
Saameyn moodo ama dareen caadi ah? Dumarku way diidaan in badan oo laga saaro timaha